Mandalay Gazette မှာ Comment ပေးတာလေးတွေ သတိထားစေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » Mandalay Gazette မှာ Comment ပေးတာလေးတွေ သတိထားစေချင်
Mandalay Gazette မှာ Comment ပေးတာလေးတွေ သတိထားစေချင်
Posted by etone on Jul 5, 2011 in Letter to The Editor, Opinion - Op-ed, Opinions & Discussion | 22 comments
ကိုယ့် အီးမေးလ် address ကို publish ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ
ရွာသူရွာသား အားလုံးပဲ ခါတော်မှီသတင်းလေးပေးချင်ပါတယ် … ။
အခုလေးတင် သဂျီးဆိုက်ကို ပြင်တဲ့အခါ အယ်ရာ နည်းနည်းရှိနေပါသေးတယ်။ သုံးစွဲရတာ မြန်ဆန်လာပေမဲ့ … ပရိုက်ဗိတ်ဆီနဲ့ နည်းနည်းပတ်သတ်တဲ့ အယ်ရာ တွေ့လို့ သဂျီးကို လှမ်းပြောထားပါတယ် … အရင်ကလို ဖွက်သင့်တဲ့စာသားတွေ မဖွက်ပဲ ပေါ်နေတာလေးတွေ ရှိနေသေးလို့ … ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့လူရဲ့ ပို့စ်မှာ မန်းတာလေးတွေ ခဏလောက်မလုပ်ပါနဲ့ သေးဦးလို့ ကြိုပြောထားချင်ပါတယ်… ။ သဂျီးကိုလည်း အကြောင်းကြားထားပြီးပါပြီ … ။
comment ပေးတာလေးတွေ ခဏဆင်ခြင်သင့်အောင်ပါ …။ ပြင်ပြီးပြီလို့ သဂျီး confirm လုပ်တော့မှ ဆက်မန်းလျှင် အားလုံးရဲ့ ပရိုက်ဗိတ်ဆီ လုံခြုံပါလိမ့်မယ် … ။
အင်း စိတ်ချရတဲ့လူ ထင်လျှင်တော့ မန်းလို့ရပါတယ် … ။
အစ်မက သိတာလေးကို ပြန်ပြောပြတာပါ … သူများ address သိတော့လည်း ဘာမှ လုပ်မိမှာမဟုတ်ဘူးလေ… တချို့ မသမာတဲ့လူတွေ သိသွားလျှင်သာ အင်ဗိုက်လုပ်ချင်လုပ်ပြီး အနှောက်ယှက်ပေးမှာ စိုးတာမို့ပါ ။
email address ပေါ်တာမျိုးလား အရင်တစ်ခါက ပေါ်တယ် အခုနောက်ပိုင်း မတွေ့မိပြန်ဘူး
သူကြီးလဲ မိန်းမနဲ့ တစ်ခါရန်ဖြစ် တစ်ခါပြောင်းများ လုပ်နေလားမသိဘူး
မနက်ကလည်း အမည်မပြောင်းပဲ အရင် နာမည်ပေါ်နေလို့ ပြန်ပြောင်းရသေးတယ်
ရွာသူရွာသား အားလုံးပဲ သဂျီး setting ပြန်ချိန်လိုက်ပြီဖြစ်လို့ … လွတ်လပ်စွာ ပြန်မန်းနိုင်ပါပြီ … ကိုယ့် မေးလ်address တွေ ပို့စ်ပိုင်ရှင်က သိနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး … ။
ကျေးဇူးပါပဲ etone ရေ အခုလို အသိပေးတဲ့ အတွက်
ကျေးဇူးပဲ etone ရေ။
သူကြီးက အမွေပေးမယ်ဆို တို့ပဲ အရင်ဆုံးရမယ်ထင်ပ။
erosသည်ဤGZကို သံယောဇဉ်ရှိသည့်အားလျှော်စွာ ရွာထဲတွင်လည်ပတ်ရသည်ကို နေ့စဉ်အလုပ်တခုကဲ့သို့ပျော်ပိုက်ခဲ့သည်။
သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်း ခင်မင်ကူညီအားနာတတ်သည့်အကျင့်လည်း ရှိပါသည်။
ယခုတလော ဤGZတွင် သူ့ထက်ငါတိုက်ခိုက်လို၍သော်လည်းကောင်း စနောက်၍သော်လည်းကောင်းရေးသားမှုများသည် ရေးသူအဖို့အဘယ်သို့အကျိုးရှိသည်မသိသော်လည်း သူတဖက်သား၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုထိခိုက်သည်ကိုသတိပြုစေချင်သည်။
နောင်အခါတွင် ကိုယ်ပေးသောcommentသည်သူတပါးအားထိခိုက်မှုရှိမရှိစမ်းစစ်ပီးမှရေးလျင် ပိုပီးသင့်တော်မည်လို့ အကြံပေးလိုပါသည်။
သူကြီးနှင့်သက်ဆိုင်သူများသိစေရန် ဆိုပြီး စကားဦးသန်း မနေနဲ့ … ပြောချင်တာကို တည့်တည့်ပြော ။ သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ အမျိုးစားထဲက ချစ်သူကို ရထားတော့လည်း ကွိုင်ပတ်ပြီး လိုင်းပူးတာ မဆန်းပါဘူး ။ အပျော်သဘောနဲ့ငါတို့ ရေးလိုက်ပေမဲ့လည်း တကယ့် အကြောင်းရာ အပေါ် အခြေခံပြီး ရေးတာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ … ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ နင် ၊တခြား သူငယ်ချင်းတွေ အသိဆုံးပါပဲ ။ မပိုင်ပဲ ဂေါ်လီမလုပ်ချင်ပါနဲ့ ဟာ ။
ရေးချင်ရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုရေးပေါ့။ မဆိုင်တဲ့သူနာမည်ရေးဖို့မလိုဘူးထင်တယ်။ သူများကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုလည်း ဝေဖန်ဘို့မလိုပါ။
ရော် …ခက်တာပဲ ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးဟေ့ နင့်အဖြစ်သည်းနေတဲ့ comment ကြီးကို နေရာလေးခုမှာ တွေ့ရလွန်းလို့ အလွတ်တောင် ရနေပြီ … . reply to ဆူး ၊ reply to etone နဲ့ တခြားပို့စ် နှစ်ခုအောက်မှာလည်း ရေးထားတယ် … ဒီလောက်သည်းစရာ ဘာလိုလို့လဲ ။ ဆိုရှယ်ဆိုက်ပဲ … တယောက်နဲ့ တယောက် သိနေတာပဲ ဒါရေးတာ နင်က ပွန်းပဲ့သွားတယ် ထင်လို့လား ။
တချို့ လူတွေ ဆို ….. ယောကျာ်းတန်မဲ့ အလိုက်ကန်းဆိုး မသိ ရုံးချိန်တွင်းရော ၊ ရုံးချိန်ပြင်ပပါ အကြိမ်ကြိမ် ဖုန်းဆက်တာတောင် … ငါ့ဘဲက နားလည်ပေးနိုင်တယ် …။ မန်းတဲ့အထဲမလာတဲ့ လူတွေ နာမည်တောင် ပျော်အောင် ရေးထားသေးတာပဲ … ။ တကယ်ရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုလျှင် နင့်နာမည်လည်း ထည့်ရေးမိမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါကြောင့် မဆိုင်တဲ့ လူနာမည် ထည့်ရေးတာ ဟုတ်မဟုတ် ပြန်စဉ်းစား ။
မဝင်တာကြာတော့ ရွာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေကြပါလိပ် နှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်
အဲလို ဖြစ်တာ တွေ့မိတယ်.. ကွန်မန်း တိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ မသိဘူး.. အခု မြင်ရသေးလား။ မြင်ရင် အကြောင်းပြန် ဒါပဲ
အခု မမြင်ရတော့ပါဘူး ဆူးရေ … မနေ့က တည်းက ပို့စ်တင်ပြီး ခဏကြာတော့ သဂျီးပြန်ပြောင်းလိုက်တယ် ထင်ပါတယ် … ။
ကျနော့် avatar ပုံတော့ကြွသွားပြီ၊ နတ်ပြည်ကို…..
ရွာထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ လိုက်မမှီတော့ဘူး …. ။
မှီရာ ကားနဲ့လိုက်တော့မယ် … Taxi .. taxi ….
လမ်းကြိတ်တဲ့ ကားနဲ့ မလိုက်လို့
တို့ရော ပဲ။ သုံးသာသုံးနေတာဘာမှမသိဘူး၊ နာမည်တောင်သူများနဲ့တူနေတယ်ဆိုလို့ပြောင်းချင်တာ မပြောင်းတတ်လို့ ဒီအတိုင်းထားထားရတယ်။
ပြန်ပြင်ပြီးမှ ဒီအကြောင်းသိ လိုက် တော့ နေ မြဲ မန်းမြဲ ပေါ့်